Pa funlandia.com, inowanikwa kubva ku www.funlandia.com, chimwe chezvatinokoshesa kuvanzika kwevashanyi vedu.Iyi bumbiro rekuvanzika rinotara marudzi eruzivo rwunounganidzwa nerekodhwa funlandia.com, uye mashandisiro atinoita.
Kana iwe uine mimwe mibvunzo kana uchida rumwe ruzivo nezve yedu Yakavanzika Policy, ndapota usazeza kutibata.
Iyi Yekuvanzika Policy inoshanda kune edu epamhepo zviitiko uye inoshanda kune vashanyi kune webhusaiti yedu neruremekedzo kune ruzivo rwavanogovana uye/kana kuunganidza mu funlandia.com.Iyi mutemo haishande kune ruzivo rwakaunganidzwa kunze kwenyika kana kuburikidza nechiteshi kunze kweiyi webhusaiti.
Nekushandisa webhusaiti yedu, unobvumirana neChakavanzika Policy yedu uye unobvumirana nemitemo yayo.
Ruzivo rwemunhu rwaunokumbirwa kuti upe uye zvikonzero nei uchikumbirwa ruzivo urwu zvichajekeswa kwauri panguva yatinokumbira ruzivo rwako pachako.
Kana iwe ukatibata zvakananga, tinogona kuwana rumwe ruzivo nezvewe, senge zita rako, email kero, nhamba yefoni, zviri mukati memeseji uye/kana zvakabatanidzwa zvaunotumira kwatiri, uye chero rumwe ruzivo rwaunosarudza kutipa kwatiri.
Paunonyoresa kuaccount, tinogona kukukumbira ruzivo rwako rwekutaura, kusanganisira zvinhu zvakaita sezita, zita rekambani, kero, email kero, uye nhamba yefoni.
Isu tinoshandisa ruzivo rwatinounganidza munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira ku:
Ipa, shandisa uye chengetedza webhusaiti yedu
kuvandudza, kugadzirisa uye kugadzirisa webhusaiti yedu
nzwisisa uye ongorora mashandisiro aunoita webhusaiti yedu
gadzira zvigadzirwa zvitsva, masevhisi, mabasa, uye maficha
kutaurirana newe, zvakananga kana kuburikidza nemumwe wevatinoshanda navo, semuenzaniso, sevhisi yevatengi, kukupa zvigadziriso uye rumwe ruzivo rwune chekuita newebhusaiti, uye zvekushambadzira uye zvekusimudzira.
kuona nekudzivirira chitsotsi
funlandia.com inotevera nzira yakajairwa yekushandisa mafaira elogi.Aya mafaera anochengeta vashanyi pavanoshanyira mawebhusaiti.Makambani ese anotambira anoita izvi uye ari chikamu chekubata masevhisi eanalytics.Ruzivo rwunounganidzwa nemafaira elogi runosanganisira kero yeinternet protocol (IP), mhando yebrowser, Internet Service Provider (ISP), zuva uye chidhindo chenguva, mapeji ekureva/kubuda, uye pamwe huwandu hwekudzvanya.Izvi hazvina hukama kune chero ruzivo rwunokuzivisa iwe pachako.Chinangwa cheruzivo urwu ndechekuongorora mafambiro, kutonga saiti, kutevedzera mafambiro evashandisi kutenderedza saiti, uye kuunganidza ruzivo rwehuwandu.
Kufanana nedzimwe webhusaiti, funlandia.com inoshandisa "cookies."Aya makuki anoshandiswa kuchengetedza ruzivo, kusanganisira zvido zvevashanyi, uye mapeji ari pasaiti iyo mushanyi akawana kana kushanyira.Ruzivo urwu runoshandiswa kukwirisa ruzivo rwevashandisi nekugadzirisa webhusaiti yedu zvirimo zvichibva pamhando yebrowser yevashanyi uye/kana rumwe ruzivo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve makuki, ndapota verenga "Chii chiri makuki".
Advertising Guidelines Partners Privacy
Unogona kubvunza runyorwa urwu kuti uwane Yakavanzika Policy kune yega yega funlandia.com's advertising partners.
Ziva kuti funlandia.com haina mukana kana kutonga pamusoro pemakuki aya anoshandiswa nevechitatu mapato.
Yechitatu-Bato Yakavanzika Policies
Iwe unogona kudzima makuki kuburikidza neyako yega browser sarudzo.Rumwe ruzivo rwakadzama nezve manejimendi ekuki ane chaiwo mabhurawuza ewebhu anogona kuwanikwa pane anoenderana browser mawebhusaiti.
CCPA Zvekuvanzika Kodzero (Usatengese ruzivo rwangu pachangu).
Pasi peCCPA, California vatengi vane kodzero, pakati pedzimwe kodzero:
Inoda kuti bhizinesi rinounganidza ruzivo rwemutengi riburitse zvikamu uye zvimwe zvikamu zveruzivo rwemunhu rwakaunganidzwa nebhizinesi nezvevatengi.
Inoda bhizinesi kudzima ruzivo rwese rwemunhu rwakaunganidzwa nebhizinesi nezvemutengi.
Inoda kuti bhizinesi rinotengesa ruzivo rwemutengi risatengese ruzivo rwemutengi.
Kana iwe ukaita chikumbiro, tine mwedzi mumwe chete wekupindura kwauri.Kana uchida kushandisa chero kodzero idzi, tapota taura nesu.
GDPR Data Dziviriro Kodzero
Tinoda kuve nechokwadi chekuti unoziva nezvese kodzero dzako dzekuchengetedza data.Wese mushandisi ane kodzero yezvinotevera:
Kodzero yekuwana - une kodzero yekukumbira makopi edata rako pachako.Tinogona kukubhadharisa mari shoma pasevhisi iyi.
Kodzero yekugadzirisa - Une kodzero yekutikumbira kuti tigadzirise ruzivo rwaunofunga kuti haruna kururama.Iwe zvakare une kodzero yekukumbira kuti isu tipedze ruzivo rwaunotenda kuti haruna kukwana.
Kodzero yekudzima - Une kodzero yekukumbira kuti tidzima ruzivo rwako pane mamwe mamiriro.
Kodzero yekurambidza kugadzirisa - une kodzero yekukumbira kuti isu tidzivise kugadziriswa kwedata rako pachako pasi pemamwe mamiriro.
Kodzero yekupokana nekugadziriswa - Une kodzero yekuramba isu kugadzirisa data rako pachako mune mamwe mamiriro.
Kodzero yekutakurika kwedata - une kodzero yekukumbira, pasi pemamwe mamiriro, kuti tinoendesa data ratinounganidza kune rimwe sangano kana zvakananga kwauri.
Chimwe chinhu chatinokoshesa kuchengetedza vana pavanoshandisa Indaneti.Tinokurudzira vabereki nevachengeti kuti vatarise, vatore chikamu, uye/kana kutungamira nekutungamira zviitiko zvavo zvepamhepo.
funlandia.com haiunganidzi ruzivo rwemunhu kubva kuvana vari pasi pezera re 13. Kana iwe uchifunga kuti mwana wako akapa rudzi urwu rwemashoko panzvimbo yedu, tinokukurudzira zvakasimba kuti utitane nesu pakarepo uye tichaita zvatinokwanisa kuti tibvise saizvozvo nokukurumidza. ruzivo kubva kumarekodhi edu.